Magaaladda Buhoodle oo laga bilaabay ololaha Talaalka Cudurka Jadeecada – Radio Daljir
Janaayo 2, 2018 8:23 b 0
Buuhoodle: ololaha talaalka cudurka Jadeecadda ayaa laga bilaabay guud ahaan gobolka Cayn waxaa 5 ta maalmood ee soo socda lagu beegsanayaa in la talaalo 11 kun oo caruur ah oo da’doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 10 sano jir.
Gobolku wuxuu kamid yahay meelaha ugu badan ee cudurku ka dilaacay sanadkii tegey ee 2017 ka.
Waaarada caafimaadka Puntland ayaa fulinaysa talaalkan iyadoo fulintiisa ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 18 kooxood oo caafimaad.
Isuduwaha wasaarada caafimaadka Puntland ee gobolka Cayn. Dr. Maxamuud Axmed Daad ayaa ii sheegay in qorshuhu yahay talaalka qofkasta oo da’daas ah oo ku nool gobolka.